Zvizere otomatiki imwe-kure imwe-kure servo mota maski muchina fekitori
Mushini wese unounganidzwa nefuremu yezvinhu, kuumba, kuwacha lug, kupeta kutenderera uye zvimwe zvikamu. Iyo otomatiki muchina unogona chete kugadzira unoraswa kumeso kumeso, asi kwete N95 uye stereo masiki. Kunyangwe iyo masiki ndeyekurapa kana kwete haina chekuita nemuchina. Chero bedzi iyo mask yakaomeswa, iyo maski inogadzirwa nemidziyo iyi inogona kushandiswa pakuvhiya mask.
Yakazara otomatiki masiki evana ese ari muchina mumwe mhando nyowani yemidziyo yakagadzirirwa vatengi kugadzira maJapan emasikisi emasikisi. Iyo inoshandisa 1 ~ 4 zvidimbu zvePP yakarukwa isina-yakarukwa machira, yakamisikidzwa kabhoni uye kusefa zvinhu senge zvekudyisa zvinhu. Iyo mask inogadzirwa neiyo ultrasonic tekinoroji. Iyo maski ine yakajeka embossing, yakasimba yekutengesa uye nekukurumidza kumhanya, iyo inosangana nezvinodiwa zvekuita kwechigadzirwa. Dhizaini yemask inonyatsoenderana neyekuyera yeEuropean neAmerica, uye inoshanda zvakakwana otomatiki. Muchina wese unoumbwa nefuremu yezvinhu, kuumba, kuwacha lug, kupeta kutenderera uye zvimwe zvikamu. Iyo otomatiki yevana masiki muchina inongogadzira chete inoraswa masiki masiki, asi kwete N95 uye stereo masks.
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, iyo otomatiki hove yakaumbwa masiki muchina yakagadziridzwa muChina uye yakatengwa mumisika yekune dzimwe nyika, Muchina uyu unongoitika wega. Inogona kushandiswa kusimbisa, kupeta, kubaya uye kucheka mask panguva imwechete, Iyo yakasarudzika yekugadzira maitiro inosimbisa yakajeka mitsara uye haina kuremara mukugadzira, iyo inogona kudzikisira zvakanyanya zvinhu zvemarara uye kunyatso simbisa mhando yeiyo mask inogadzirwa.
Duckbill mask muchina muchina unoshandisa ultrasonic isina musono kutenderera musika kuburitsa duckbill yakaumbwa mask iyo inokodzera yakakwira yekusvibisa indasitiri. Iyo ine yakakwira degree of automation. Iyo ine tambo imwechete kubva pakudyisa kusvika kumagumo zvigadzirwa. Iyo ine otomatiki kudyisa kweasina kugadzirwa zvinhu, yakazvimiririra yemhino danda mutsetse irikutaridza system, uye inogona kuputira mhino mutsetse mune isina-yakarukwa jira otomatiki, peta otomatiki uye kucheka apedza zvigadzirwa, Chigadzirwa chakaburitswa nedhadha muromo maski muchina une chitarisiko chakanaka, kugadzikana kuita, goho repamusoro, yakaderera hurema chiyero uye nyore kushanda.
Butterfly chifukidzo muchina
Otomatiki shavishavi katuni chifukidzo muchina iri mhando nyowani yemidziyo yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevatengi; 2 ~ 6 zvidimbu zvePP spunbonded nonwovens, activated kabhoni uye filtration zvinhu zvinoshandiswa sekudyisa zvinhu (zvinoenderana nekusefa mhedzisiro yezvinhu zvakasvibirira, N95, FFP2 uye mamwe maitiro anogona kuwanikwa)
Mukombe mhando, mukombe mhando semi-otomatiki maski muchina, semi-otomatiki mukombe mhando maski muchina
Muchina wekudhinda unogadzira - kapu yemhando maski inopisa yekudhinda dhizaini muchina, iyo inoshandisa musimboti wekupisa kudzvanya kupedzisa mukombe-wakaumbwa masiki achiumba. Kune zvitanhatu zvinoshanda zvakapetwa munzvimbo mumuchina mumwe, uye vanhu vaviri vanoshanda panguva imwe chete.
Bhandiji mask muchina chinhu chinosunga chinosunga michina yekuwisira ndege mask. Iyo inowanzo shandiswa kusungira kutenderera kweasina-yakarukwa ndege mask. Inogona kusungira bhanji yemhando dzakasiyana dze mask mask. Izvo zvinonyanya kushanda kune inosunga iwelding ye2-layer isina-yakarukwa machira ndege mask, 3-layer isina-yakarukwa machira ndege mask, yekurapa ndege mask, 4-layer yakamisikidzwa kabhoni ndege mask uye anti-virus ndege mask.
Kavha Bubble Bhegi, Mutsvuku Wekutsvuka, Anti Static Bubble Mucheka, Mask Mugadziri, Chiso Mask Machine, Imwe Dhonza Imwe Mask Machine,